Waa Kuwee Sadexda Musharax ay sida weyn u taageersan yihiin Shacabka Soomaaliyeed ? | Gaaloos.com
Home » News » Waa Kuwee Sadexda Musharax ay sida weyn u taageersan yihiin Shacabka Soomaaliyeed ?
Waa Kuwee Sadexda Musharax ay sida weyn u taageersan yihiin Shacabka Soomaaliyeed ?
Shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta indhaha ku haya si weyna uga dhursugaya natiijada kasoo bixi doonta Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo aadan ka dhacdo hool kuyaala Xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada labada Aqal ayaa maanta dooran doona Musharaxii ay u arkaan in uu hagi karo dalka iyo dadka, waxaana inta badan Xildhibaanada lagu eedeenayaa in aysan Musharaxiinta u kala eegeyn waxqabad iyo fiicnaansho balse tooda gaarka ah kii ay ka helaan codkooda siin doonaan.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u taageersan Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood, waxaana si weyn looga dareemayaa baraha Bulshada kuwada sheekeesato iyo goobaha fadhi ku dirirada Musharaxiinta ay dadku kala taageersan yihiin.
Musharaxa ugu taageerada badan marka loo eego shacabka Soomaaliyeed aadna u jeclaan lahaayeen in uu dalka Madaxweyne ka noqdo ayaa ah Ra'isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mxaamed C/Laahi Maxamed Farmaajo.
Qaar badan oo kamid ah Shacabka Soomaaliyeed ee kunool dal iyo dibad ayaa iyana taageero weyn u haya xilkana la doonaya in uu kusoo baxo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo mar kale u tartamaya in u dalka Madaxweyne ka noqdo.
Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale isna heesta taageerada qaar badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed, waxa ayna taageerayaasha Xasan hal ku dhig u ah qabyo qofkeeda dhameestira, iyagoo aaminsan hadii Xasan uu guuleesto dalka horey usii soconayo.
Nasiib darada jirta ayaasa ah in dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda uusan maanta shaqeeneyn, waxa kaliya ee shaqeena ayna xildhibaanada codkooda ku badalanayaan ayaa ah dhaqaale iyo dano shaqsi .
Doorashada Madaxweyne ee Maanta ka dhaceysa magaalada Muwdisho ayaa ah mid aad u adag oon wali saadaalin buuxda laga bixin karin qofka kusoo baxaya kursiga Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya.
Title: Waa Kuwee Sadexda Musharax ay sida weyn u taageersan yihiin Shacabka Soomaaliyeed ?